Ndị dọkịta na-eche na nwa ahụ nwere ike ịmalite ịsa ezé ezé naanị mgbe ọ dị afọ asatọ. Ma na nke a emeghị, ị kwesịrị ịmalite ilekọta oghere ime ọnụ n'ihu tupu mbido ezé.
Mmiri ara ehi ezé. Ka anyị chebe ha!
Ụfọdụ ndị nne na nna adịghị aghọta mkpa nke ezé ezé n'ime ụmụaka. E kwuwerị, mgbe ọ dị afọ 13, a gaghị enwe otu ezé dị otú ahụ. Ya mere, gịnị mere eji etinye mgbalị siri ike, ịdị uchu? N'ezie, ọ dịghị ihe ọ bụla na-abaghị uru na ahụ nwatakịrị ahụ. Ma obere ihe a, mgbe ụfọdụ, ezé mbụ na-enweghị nchekasị na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ime ya. Dịka ọmụmaatụ, ha na-enye aka n'idozi nwa kwesịrị ekwesị, na-edebe ebe maka ịnọgide na-ezé ezé, nke kachasị mkpa, na-enye aka n'ikwu okwu kwesịrị ekwesị ma na-ekere òkè n'iwepụta akụkụ eriri afọ! Ọzọkwa, ndị dọkịta achọpụtawo n'oge gara aga na ọrịa, ezé mmiri ara ehi mebiri emebi na-emetụta ahụ ike nke isi ihe ndị bụ isi. Ndị nke a nwere ike ọbụna na-eto eto n'ọnọdụ ha.
Nke a pụtara na ị nwere ike ịmalite ịmalite ilekọta oghere nke nwa na-esote. N'abalị nke ọdịdị nke ezé mbụ, zụrụ nwa nwa brush - a teetotal. Ọ ga-enyere gị aka ịnagide ahụ erughị ala n'oge oge siri ike maka nchịkọta. Mgbe ezé malitere ịpụta, ọ dị mkpa ịmalite ihicha ha. Ị ga-ebu ụzọ zụta ahịhịa silị pụrụ iche, nke a na-eyi na okenye. Mgbe nwatakịrị ahụ chigharịrị ọnwa 10, ha amaliteworị iji otu nwa ezé.
O kwesịghị ichefu na ọ bụ mkpa ka nlekọta nke nwa na-elekọta ya ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-eri nri, ma ọ bụrụ na ọ na-enwe mmasị ịṅụ mmanya na-aṅụ kefir, ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ mmiri ara ehi. Ọ bụ ihe ọṅụṅụ ndị a, na-aṅụ mmanya n'abalị, na-enye aka na mmepe nke caries na ụmụaka. Kedu ihe m kwesịrị ime? Ugboro abụọ n'ụbọchị na mgbe nri abalị gasịrị, ị ga-ehichapụ ezé na obere nwa ezé ma ọ bụ naanị ụfụ na-egbu mmiri.
Cheta na ilekọta ezé ezé bụ isi nsị ezé kwa ụbọchị (ugboro abụọ n'ụbọchị). Ọ ka mma iji gbochie mmepe nke caries karịa ịgakwuru ndị dọkịta na ịnọgide na-eso ya na-aga n'ihu. N'ezie, ọ dị mma ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere ike ịkụziri dọkịta ezé ka ọ taa ya ezé. Nke a nwere ike ime mgbe nwatakịrị ahụ amalitela ịghọta ihe ọmụma, ya bụ, ebe n'ime afọ 4. Mana tupu nke ahụ, ị ​​ga-arụ ọrụ nlezianya nke oghere ọnụ, dị ka e deworo ya, ọbụna tupu ọdịdị nke ezé mbụ ahụ apụta.
Nwatakịrị ahụ achọghị ịkụ ezé ya. Kedu ihe m kwesịrị ime? Anyị na-akwadebe nwa ahụ site na nwata.
N'ụzọ dị mwute, na omume ọ na-apụta na ọtụtụ ndị nne na nna amụtabeghị site na ebe ọ bụla ha ga-esi kụziere nwatakịrị ka ọ na-ata ikikere ezé ya. Ndị nne na ndị nna ji obi ụtọ na-aga ụlọ ahịa ahụ, na-azụta ụfụcha maka ụmụntakịrị, na-agwa ha otu esi ehichapụ ezé ha n'ụzọ ziri ezi, na ụmụaka - na nke ọ bụla. Emela ka ha lekọta ezé ha ma ọ bụ ya. O yiri ka nne na nna nwa ahụ maara mkpa nke usoro a, mana ha enweghị ike imetụta nwa ahụ. Kedu ihe m kwesịrị ime?
Nke mbụ, nwee ndidi na nwa ahụ. Rịba ama, na nke a dị mkpa, usoro ịkụnye ezé gị maka nchịkwa bụ ọrụ na-adịgide adịgide, nke na-enye ya nlekọta dị egwu. Gbalịa ịgbanwe nke a! Mee ka usoro a na-egbuke egbuke ma na-enwe obi ụtọ, mee ya egwuregwu. Mee ka nwatakiri nwee ezé ezé, ọ ga-adị mma, (ọ ga-adịkwa mma ma ọ bụrụ na ọ dịkwuo mma), na n'ihu - gị creativity! Onye na-esi na mpempe akwụkwọ nwere ike na mberede ghọọ ice cream, ma ọ bụ chocolate. Ọ na-adabere nanị n'echiche nke nne na nna.
N'ime afọ 2, ị nwere ike ịkụziri nwatakịrị ahụ ka ọ kpochaa ụdị anụ ahụ mgbe ọ bụla nri. Iji kwadebe nwa ahụ, mgbe ụfọdụ, nye ya nsí ezé (nwantakịrị dị nro na nwatakịrị) na-enweghị onye na-ezipụ ezé mgbe ọ na-ehichapụ ọnụ. Yak enye ada, ẹnọ enye. Nke a bụ nnọọ ihe nkịtị. Ya mere, ị na-azụ nwa ahụ ka ọ na-eme ihe mgbe nile na iji brush. Nke a pụtara na ọ ga-adị mfe karị.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji soro nwa gị belata ezé gị iji nyere ya aka n'oge kwesịrị ekwesị, chịkwaa usoro ahụ. Mana, n'otu oge ahụ, ka nwatakịrị ahụ chee na ya onwe ya nwere onwe ya, agbalịrị ịchịkwa ya niile.
Jide ya na ezé. Olee otú iji zere egwu?
Ọ dị ezigbo mkpa ka ịzụlite àgwà nwatakịrị ahụ n'ụzọ ziri ezi ka ọ na-aga n'ihu eze. Nleta mbụ nke dọkịta ezé nwere ike ịmalite ịchọta ihe dị omimi nke nwa ahụ, na-enye aka na ntụrụndụ na-enweghị ezi uche, na-emetụta echiche nke dọkịta eze na okenye. Iji gbochie nke a ime, gbanwee njem ahụ gaa dọkịta na njem. Chee echiche banyere ihe nkiri ụfọdụ, njakịrị banyere nkedo ezé. Ihe ọ bụla, na-ezere okwu ndị dị ka ịṅụ ọgwụ, sirinji, wdg. Ka nwatakịrị ahụ mara okenye na obi ike.
Dịka ọmụmaatụ, ka nleta mbụ nke nwa ahụ gaa n'ụlọ ọgwụ ahụike ga-adị mma ma na-atọ ọchị, ma n'otu oge ahụ, iji kụziere nwa ahụ ka ọ dọpụ ezé ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịmalite na nke ọzọ. Gwa onye dọkịta - onye na-agwọ ya. Ọ ga-agbatị ezé nwa ahụ na ọgwụgwọ pụrụ iche, nke na-adịghị emerụ ahụ, ma rịọ nwa ahụ ka ọ dụpụ ezé ya dịka ọ na-eme n'ụlọ. Gwa ya ihe ngosi nke ezé na enyo. Ezé na-anọgide na-acha agba aja aja, ya bụ ebe ndị ahụ adịghị emerụ. Ụzọ dị irè n'ụzọ dị irè! Tụkwasị na nke ahụ, karịa ihe nkiri nke nwa ahụ ugbu a?
Na nke ikpeazụ. Iwu nke ehichapụ ezé gị, nke nwa ọ bụla kwesịrị ịmụta.
Nke a bụ ụfọdụ iwu dị mkpa, nke nwatakịrị ahụ ga-amarịrị site na afọ isii.
1. Tupu iwere ahịhịa, ị ga-asa aka gị. Mgbe ahụ, a na-asa ahịhịa n'okpuru mmiri na-agba agba.
2. N'okpuru ahịhịa ahụ, ọ dị mkpa ka itinye ntakịrị obere obere nwa na-egbuke egbuke.
3. Nhicha nke ezé nwere mmeghari okirikiri, nke dị nhata na ikuku. Kwesịrị ịmegharị "mgbapụ".
4. Tupu na ehichapụ ezé, kpochapụ ọnụ na mmiri ọkụ.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ maara iwu ndị a nile, mgbe ọ dị afọ asatọ, ọ ga-ekwe omume ịkwụsị ịchịkwa usoro nke ịkụnye ezé.
Ọ na-eme gị obi ụtọ!
Nnukwu anụ ahụ
Mkpa na ụmụaka: mgbaàmà, ọgwụgwọ
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nwatakịrị na-egbu ya
Ọmụmụ ihe nke nzube: iwu ise nke mmekọrịta ya na nwatakịrị ahụ
Nsogbu nke mgbaze na ụmụ ọhụrụ
Inye nwa na-egbu egbu
Na mmekorita bụ àgwà nke omume ma ọ bụ atọ n'ime atọ dị mkpa?
Kedu otu m si eme ngwa ngwa ka nku anya dị mma
Kedu ka esi eji hitchhike n'enweghị nsogbu?
Infertility: ọgwụgwọ ndị mmadụ
Chicken broth, mmanụ aṅụ na lemons na ọgụ megide oyi
Krismas na-eche banyere tii: ụzọ na nkọwa
Karịa ezumike bara uru
Kulebyaka na imeju
Nne na nna: otu esi enyere ndị nne na nna aka ịzụlite nwa ahụ ike
Na-apụta nke zucchini na obi cheese
A mụrụ ya n'afọ
Shibari dị ka ụzọ isi gbanwee mmekọahụ
Njirimara na ojiji nke mmanu mmanu di mkpa
Ọ bụrụ na nwoke anaghị eme ihe mgbe ọ gachara otu afọ: Atụmatụ egwuregwu
Nri na ugu
Uwe isi maka ndị inyom nke agadi
Lasagne na akwụkwọ nri